.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Free SWF to AVI Converter (အသုံးပြူနည်းအနည်းငယ်ပြန်ပြင်ထားသည်)
Free SWF to AVI Converter (အသုံးပြူနည်းအနည်းငယ်ပြန်ပြင်ထားသည်)
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ FlashSong ကို Video ပြောင်းလိုသူတွေအတွက်ပါ။
မနေ့က Xilisoft Photo to Flash လေး Full Version လိုချင်လို့လိုက်ရှာတာ
အရင်တုန်းက တွေ့တဲ့ဟာတွေက Qualityမကောင်းတာနဲ့ အသံမပါတာနဲ့ သုံးလို့အဆင်မပြေဘူး ။
ဒါလေးကတော့ Quality ရော အသံရော မူရင်း swfဖိုင်တွေနဲ့မကွာဘူး။
အတော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ကိုပြန်shareပေးတာပါ၊
Free Version လေးပါ၊ အောက်မှာ ဒေါင်းနိူင်ပါတယ်။
Free SWF to AVI.zip
ပြီးရင် convert ကို click ပြီး play and capture ကို click ပါ။
သီချင်းဆုံးတဲ့အထိနားထောင်ပြီးတာနဲ့ တစ်ပြိုင်ထဲ finishကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
ရလာတဲ့ video fileလေးကတော့size ကြီးမယ်။
အဲဒါကိုFormat Factoryနဲ့ပြောင်း size သေးသွားလိမ့်မယ်။
MP4 Format ဖြစ်သည့်အတွက် Facebook တို့ YouTube တို့မှာတင်လို့ရပါပြီ။
ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး video က တင်လိုက်တော့ဝါးသွားပါတယ်။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း HD ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ မူရင်းအကြည်အတိုင်းကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
အောက်မှာ video file လေးပါ။
အဆင်ပြေပါစေ။ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင် credit လေးထည့်ပေးပါ။
Posted by FlashSongCrazy at 12:02
Labels: Converter, Flash, Software